Ngwaahịa na lierslọ Ọrụ - Ndị Na-emepụta Ngwaahịa China - Nkebi nke 3
Akụrụngwa tubing maka HDF
A na-eji ngwaahịa a eme ihe n'usoro ọcha ọbara dị ka pipeline maka hemodiafiltration na ọgwụgwọ hemofiltration na nnyefe nke mmiri mmiri na-agbanwe.
A na-eji ya maka hemodiafiltration na hemodiafiltration. Ọrụ ya bụ ibufe mmiri mmiri nọchiri anya ya maka ọgwụgwọ
Ọdịdị dị mfe
Differentdị ngwa ngwa tubing maka HDF dabara adaba maka igwe dị iche iche.
Nwere ike itinye ọgwụ na ojiji ndị ọzọ
A na-ejikọkarị ya na pipeline, T-joint na pump tube, a na-ejikwa ya maka hemodiafiltration na hemodiafiltration.
Hemodialysis na-etinye uche
Ngwunye otu ọrịa, otu ngwugwu (ezigbo ngwugwu),
Ugboro abụọ-ndidi ngwugwu, abụọ-ndidi ngwugwu (ezi ngwugwu)
Disposable extracorporeal mgbasa tubing kit maka keakamere obi-akpa ume machinec
Ngwaahịa a bụ nke mgbapụta ọkpọkọ, eriri aorta na-enye ọbara, aka ọkụ nke aka ekpe, eriri obi ziri ezi, tube na-alọghachi, tube a na-echekwa, njikọta kwụ ọtọ na njikọ ụzọ atọ, ma dabara adaba maka ijikọ akụrụngwa obi-ngụgụ igwe dị iche iche ngwaọrụ iji mepụta usoro sistemụ usoro ọbara mgbe ọ na - ekesa ọbara maka ịwa ahụ obi.
Ọbara microembolus iyo maka otu ojiji
A na-eji ngwaahịa a arụ ọrụ obi n'okpuru ọhụụ na-enyocha microembolisms dị iche iche, anụ ahụ mmadụ, mkpụkọ ọbara, microbubble na ihe ndị ọzọ siri ike na mgbasa ọbara extracorporeal. Ọ nwere ike igbochi embolism microvascular nke onye ọrịa ma chebe microcirculation ọbara mmadụ.
Blood akpa & nyo maka otu were
The ngwaahịa na-eji maka extracorporal ọbara mgbasa ịwa ahụ na nwere ọrụ nke nchekwa ọbara, iyo na afụ mwepụ; emechiri akpa ọbara & nyo na-eji maka mgbake nke ọrịa nke aka nke onye ọrịa n'oge ọrụ ahụ, nke na-ebelata ihe mkpofu nke ọbara mgbe ị na-ezere ohere nke ịrịa ọrịa ọbara, nke mere na onye ọrịa ahụ nwere ike inweta ọbara autologous ọzọ a pụrụ ịdabere na ya .
Mgbatị tube (nke nwere ụzọ atọ)
A na-ejikarị ya eme ihe maka ogologo mgbatị dị ogologo, na-enye ọtụtụ ụdị medine n'otu oge na ngwa ngwa ngwa ngwa. tube, akụkụ ogwu, njikọta siri ike, oghere agịga（dị ka ndị ahịa'chọrọ).
Adaba maka mgbapu na dosing, na mfe iji.
IV Catheter bụ nke a na-ejikarị tinye ya n'ime sistemu vaskụl na-agwọ ọrịa maka ịmịnye / mmịnye ugboro ugboro, nri ndị nne na nna, nchekwa ihe mberede wdg. IV catheter nọ na onye ọrịa na-arịa ọrịa. Enwere ike ijide ya ruo awa 72 ma ọ bụ kọntaktị ogologo oge.
Ọ nwere ọrụ ntụgharị na-aga n'ihu. Mgbe infusion gwụchara, a ga - ewepụta mmiri dị mma mgbe a ga - atụgharị infusion ahụ, iji mee ka mmiri mmiri na -
<< <Gara aga 12345 Osote> >> Peeji 3/5